Imibono yangempela yokusizakala ngezimali zakwamanye amazwe ezisele | Izindaba Zokuhamba
Ungazisebenzisa kanjani izinsalela zakho zangaphandle zezimali ku-iTunes
Impela kwenzeke kuwe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa. Sihlela uhambo lokuya phesheya futhi lapho sibuya siletha konke njengezikhumbuzo. Kusukela ezithombeni, kokuhlangenwe nakho futhi, nezinhlamvu zemali. Futhi manje, sizokwenzani ngabo? Kunemibono eminingi engase ifike ekhanda lakho.
Ngokulandelayo sizophakamisa eziningana izixazululo zoqobo zokusebenzisa izinhlamvu zemali ozishiyile.
1 Ungayisebenzisa kanjani imali yangaphandle?
1.1 Zisebenzise njengezikhumbuzo
2 Sebenzisa ngokunenzuzo imali yakho yangaphandle esele ku-iTunes
Ungayisebenzisa kanjani imali yangaphandle?
Njengoba besivele simemezele, kunezindlela eziningi okufanele sisebenzise ngazo imali yakwamanye amazwe. Kuzohlala kuncike kokuthandwayo ngakunye, kepha-ke, kungcono ukucabanga ukukwenza ngendlela emnandi. Tshala imali yethu ezintweni zokuzilibazisa ezingcono kakhulu akulona iqiniso.
Ngokungangabazeki, abantu abaningi abafika bephethe izinhlamvu zemali emaphaketheni abo, bafuna ukubashiya njengoba inkumbulo yohambo. Abanye banikeza ezinye ezizosala nakudrowa zikhohliwe ngandlela thile. Yebo, kuyindlela evumelekile kakhulu, kepha kuphela uma kuyimali encane. Ngaphandle kokungabaza, uma uletha okwanele, kungcono ukuzama ukukutshala.
Isixazululo, mhlawumbe esinengqondo ngokwengeziwe, ukubuyela emuva zishintshe zibe yimali yakho. Ikakhulu lapho wazi ukuthi uhambo olunje ngeke luphinde lwenzeke. Ngakho-ke, ungazisebenzisela ukuthenga okuncane noma ama-whims ahlukahlukene. Yize kwesinye isikhathi kungasinikeza nobuvila obuthile ukuthi kumele sibuyele emuva ebhange siyokwenza ushintsho uqobo.
Isikhathi esifushane, abantu bebelokhu bekhuluma ngakho Imishini yabahambi-Ibhokisi. Eminye imishini esezikhumulweni zezindiza nalapho ungashintsha khona imali yakho ukuyidlulisela ku imali online. Ngale ndlela, izofinyelela ku-akhawunti yakho ye-Paypal futhi-ke, ungayisebenzisa ezindaweni ezahlukene ezifana ne-iTunes. Vele, lezi zinhlobo zemishini azikasatshalaliswa emhlabeni wonke, kepha zigxile eCanada, e-Italy noma ePhilippines, phakathi kokunye. Ngaphezu kwalokho, bathatha nesabelo sekhomishini. Kuthiwa ingu-7% nokuthi ngesikhathi samahora angama-48, inani elifakiwe lizovela ku-akhawunti yakho.
Sebenzisa ngokunenzuzo imali yakho yangaphandle esele ku-iTunes
Ngemuva kokubona lezi zinketho, sisele nesinye esifana nesesithathu. Lokho wukuthi, sizozama ukutshala imali yethu enkonzweni ephelele kakhulu. Asifuni ukubasindisa futhi asifuni ukukhokhiswa amakhomishini. Ngakho-ke, okuwukuphela kwento esingayenza ukuzivumela sithathwe yilokho esikuthandayo.
Ku-iTunes sizoba nezinketho eziningi zokukwazi ukwenza izindleko ezincane. Ungayifinyelela kanjani? Yebo, singayenza sibonga i- Amakhadi we-iTunes ukuthi babeka ezandleni zethu. Ngekhodi, ungayisebenzisa futhi uqale ukuyisebenzisa kuyo yonke leyo mikhiqizo oyithandayo. Ngakho-ke, uzoba nefayela le- ikhadi elikhokhelwa ngaphambili ngezinhlamvu zemali zakho zangaphandle. Ngaphandle kokungabaza, kuyindlela engcono kakhulu yokutshala imali yakho, impela iyohlala iyimali encane. Noma, kwababiza kakhulu bangasebenzisa nokuncane kakhulu.
Unamanani amaningana asuka kuma-euro angama-15. Ngakho-ke, ngokuqinisekile phakathi kwawo wonke amaphakethe namasutikesi abuya ohambweni lwakho olungenakulibaleka, uzoba nalokhu nokuningi. Kubukeka sengathi ubuchwepheshe obusha bigxile kulo mbono kungekudala ngeke sidinge ukheshi ukuze sikwazi ukubona ama-movie esiwathandayo. Mane usebenzise amanye amakhodi ukuze ukwazi ukukwenza qasha amateyipu ethu okuqala. Njengoba sikwazi ukubona, uma ngabe unemibuzo mayelana nokuthi wenzeni ngezimali zamanye amazwe, ngokuqinisekile manje izoxazululwa.
Ku-iTunes, umculo ohamba phambili, ama-movie athokozisa kakhulu, izincwadi eziphumelela kakhulu noma izinhlelo ezingenakubalwa zisilindele uma unedivayisi ye-iOS. Akuwona yini umqondo okhangayo lowo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Ungazisebenzisa kanjani izinsalela zakho zangaphandle zezimali ku-iTunes
Yini ongakuphutheli eBali
Izindawo ezi-6 zokuvakasha ngesikhathi sohambo oluya eBeirut